အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇
Posted by kai on Feb 4, 2017 in Critic, Editor's Notes | 13 comments
Wednesday 1 February 2017 22.55 EST
ပီးတော့ အာက်ပါ facebook လင့် နှိပ်ပြီးဝင်ပါ
Facebook ကရေကာ တာပုံကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်
၎င်းပုံအောက်မှာ ၁၅၆၀၀၀ “ကြိုက်” ကိုရှာပေးပြီး
(အခြားနေရာမှာ “ကြိုက်” ကိုနှိပ်နိုင်သလို ဒီနေရာမှာလဲ”ကြိုက်”ကိုနှိပ် နိုင်ပါတယ်)
အမေရိကန်တွေခမျာ ရူးပဲ ရူးမလား…
ဘာဖြစ်လာမယ်.. သိသိကြီးနဲ့.. အတင်းဝိုင်းဆွဲတင်ပေးလိုက်တယ်လို့.. မြင်သာလာတယ်..။
အကြံကြီးကြီးတွေ.. စ, လှုပ်လာတော့မယ်ပေါ့…။
Dawn.com | Naveed Siddiqui — 2/8/17
Trump တက်လာမှ အမေရိကန်တွေ အမှန်တကယ်ပြောင်လဲမှုကိုကြုံရတာဗျ…
Embattled Suu Kyi craftsa‘fightback’ strategy
Myanmar’s de facto leader aims to counter criticism over Rohingya, reform delays
But Suu Kyi, who waited 27 years to lead her country, knows better than most that there are many ways to play — and to win —along and daunting game.
Monday, February 13, 2017, 8:21 AM
Some people believe that they are taking “good jobs” away from “real Americans,” so if you believe that, here’sasolution: If the only jobs that American-born people can get is cleaning dishes in the basement ofarestaurant or changing the diapers on the Secretary of Labor’s kid for minimum wage, we should probably help those American-born people, right?
So let’s make higher education free for all American citizens. That way, some undocumented Mexican won’t be stealingalow-paying manual labor job from anyone — except another undocumented Mexican.
Feb. 20, 2017, at 10:15 a.m.
ဘီလ်ဂိတ်က.. လူတွေရဲ့အလုပ်တွေကို အစားထိုးလာနေတဲ့ရိုဘော့တွေကို အခွန်ကောက်ဖို့အကြံပြုသတဲ့..။
Bill Gates’s Plan to Deal With Job-Stealing Robots: Just Tax Them
What will we do about all the people who lose their livelihoods? It’sahotly contested subject, with several startup luminaries, including Elon Musk, insisting governments are going to have to start providingauniversal basic income to every citizen. (Finland is already experimenting with the idea.)
Updated 4:50 PM ET, Wed February 22, 2017
မီဒီယာကြီးတွေ အိမ်ဖြူတော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအခန်းထဲ ပေးမ၀င်.. ပိတ်ပင်တားဆီးခံရသတဲ့..။
By Paul Farhi February 24 at 8:29 PM
Myanmar Gazette Mar 2017 by myanmar8gazette on Scribd
Posted on February 19, 2017 by YiminGeNY